Umcamelo weLatex ohamba phambili onomhlinzeki wekhava | Rayson
Rayson eRayson Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Imikhiqizo eyinhloko umcamelo we-Latex omuhle onomhlinzeki wekhava
Ukusebenza komkhiqizo kuthuthukiswe kakhulu ngu-R wethu oqinile
& D iqembu.
Silandela ngokuqinile izinqubo ezijwayelekile zokulawula ikhwalithi ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo yethu ihlangabezana noma yeqa okulindelwe ngamakhasimende ethu. Ngaphezu kwalokho, sinikezela ngezinsizakalo zokuthengisa ngemuva kwamakhasimende emhlabeni wonke. Kuze kube manje, uRayson udlulise isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi yamazwe omhlaba jikelele. Yonke imikhiqizo kubandakanya umkhiqizo wethu omusha inikezwa nge-design entsha, ikhwalithi eqinisekisiwe, namanani entengo wokuncintisana. Ngemuva kweminyaka yentuthuko, sisungule ubudlelwano bokubambisana besikhathi eside namakhasimende ethu emhlabeni jikelele. Sicela uqiniseke ukuthi sinelungelo lokuthekelisa imikhiqizo yethu futhi ngeke kube khona umonakalo owenzekile empahleni ehanjisiwe. Samukela ngobuqotho uphenyo lwakho futhi ushayele.
Ngingawathola kanjani amasampula？ Ngemuva kokuthi uqinisekise ukunikezwa kwethu futhi usithumelele izindleko zesampula, sizoqeda isampula kungakapheli izinsuku eziyi-15 ~ 20. Ungacela inkampani evelele ukuthi ithathe isampula enkampanini yethu noma ungasithumela i-DHL, FedEx noma i-UPS iqoqe inombolo ye-akhawunti, singakuthumela isampula lelo nge-akhawunti yakho. logo kumkhiqizo? Singenza umatilasi ngokusho komklamo wakho noma sinikeze insizakalo ye-OEM sidinga nje ukuthi usinikeze umkhiqizo wakho wobuciko noma izithombe zelogo. 1.Beka ibhokisi phezu kwendawo eyisicaba egumbini lakho lokulala, donsela umatilasi ngokucophelela bese ubeka embhedeni wakho. 2. Sika ngokucophelela isikhwama sangaphandle ngesikele uqiniseke ukuthi awusiki ipulasitiki embi ngaphakathi noma kumatilasi, ungammangaleli ummese 3. Khipha umatilasi ovaliwe ongenalutho ungene embhedeni wakho 4. Sika ngokucophelela isikhwama sepulasitiki eceleni kwewashi njengoba umatilasi eqala ukuwohloka ngokushesha, Susa isikhwama sepulasitiki. 5.Vumela amahora angama-24 ukuthi omatilasi bakho abasha banwebe ngokugcwele.